It is me. Ko Niknayman.: ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြပြီ
၁၉ သြဂုတ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ပြောပြချက်
လမ်းတလျှောက်မှာ ပထမ လျှောက်လာခါစမှာ လူ ၂၀၀-၃၀၀ လောက်ပဲ၊ နောက်ကျတော့ မှတ်တိုင်တွေမှာ လူတွေက မေးတော့ ဘာလုပ်တာလဲ၊ ဘာလုပ်တာလဲ။ ဒီလို ဒီလိုပဲ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ လောင်စာဆီတွေ ဈေး တက်တဲ့အတွက် လမ်းလျှောက်ကြတယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့လည်း ဆင်းလာတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်း သူတို့လည်းလျှောက် ဆိုပြီးတော့ လိုက်လာတယ်။ နောက်ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေလည်း ၀င်ပြီးတော့ ပါလာ ကြ တယ်။ တက္ကစီပေါ်က လူတွေကလည်း အားပေးတယ်၊ အခက်အခဲ အကုန်လုံး တူနေကြတယ် ဆိုတော့ ကားသ မားတွေက ဆင်းပြီးတော့ လက်နှုတ်ဆက်တာ ရှိတယ်။ ကားပေါ်က လက်ပြကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရွှေဂုံတိုင် မီးပွိုင့် ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မှတ်တိုင်က လူတွေကပါ သဘောပေါက်သွားပြီးတော့ အဲဒီမှာဝင် ပူးပေါင်းကြတယ် ။ နောက်ဆုံး တာမွေဈေး ကျောက်မြောင်းဈေး တွေရောက်လာတဲ့ အခါမှာ လူအုပ်တွေက အ ရမ်းများသွားတဲ့ အခါကျတော့ လမ်းတွေပါ ပိတ်သွားတော့ လမ်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်မှာစိုးလို့ အဲဒီမှာ လူစုခွဲလိုက် ရ တယ်။
အာဏာပိုင်တွေက မနှောက်ယှက်ဘူးဗျာ။ ရိုးရိုးပဲ ပြောရရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်။ ဟိုင်း လတ်ကားတွေနဲ့လာပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်။ ဒီလောက်ပဲ ရှိတယ် ။ တည့်တည့် ကျနော်တို့ကို ဘာမှ အန္တရာယ် မ ပြုဘူး ။ တခု ရှိတာပေါ့ဗျာ၊ ဘုရားတွေ ဘာတွေကိုတော့ အသည်းအသန် ကျနော်က ခြောက်ထပ်ကြီး ငါးထပ် ကြီးတို့က ဖြတ်လာတော့ ဘုရားတွေပေါ်တက်ပြီး ဆုတောင်းမယ် ထင်ပြီးတော့ သူတို့က ဘုရားတွေမှာတော့အ သည်းအသန် ပိတ်ဆို့ထားကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ဒီနေ့ ဆုတောင်းဖို့လာတာ မဟုတ်ဘူး ၊ လက်တွေ့ ပြဖို့ လာတာကိုး ။
ဆန္ဒပြသူတဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောပြချက်
ဆီဈေးတွေ တက်လို့၊ ကားမစီးနိုင်လို့၊ လမ်းလျှောက်တယ် ဆိုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ လျှောက်လာခဲ့ကြတာ။ နောက် လမ်းမှာတွေ့တဲ့ တချို့ ခရီးသည်တွေထဲက ၀င်ပူးပေါင်းတာ လျှောက်တာရော၊ ဘာရော အားလုံး ကျ နော်တို့ လူသုံးရာလောက် ရှိမယ်ထင်တယ် ။ အဲဒီတော့ လူတန်းကြီးနဲ့ ကျနော်တို့ ရွှေဂုံတိုင် ကနေပြီးတော့ တာ မွေ ဈေးအထိပေါ့ ။ ငါးထပ်ကြီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီး၊ ကျော်ပြီးတော့ တာမွေဈေး၊ ကျောက်မြောင်းဈေး၊ အဲဒီအထိ တောက်လျှောက် ကျနော်တို့ တမင်တကာကို အဲဒီအထိ လျှောက်လိုက်တယ် ။ လျှောက်တော့ ပရိပ်သတ်က အဲဒီ ကားပေါ်ကနေပြီးတော့ လက်ပြသွားတာတွေ၊ လက်မ ထောင်ပြသွားတယ်။ အဲဒါ လုပ်ကြပါ၊ ကြိုးစားကြပါ ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ် ။ အားပေးတဲ့ လူတွေကလည်း အားပေးသွားကြတာ ပေါ့လေ။ ရေသန့်တွေ ပေးတဲ့လူ ကလည်း ပေးတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ ကျောက်မြောင်းဈေး ရောက်ပြီးတော့မှ တာမွေဈေးကို ပြန်လှည့် ပြီးတော့ လူစု ခွဲလိုက်ကြတယ် ။
အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့၊ နောက်တချို့ ကားပေါ်ကနေ ပြီးတော့ ကားနဲ့ တောက်လျောက် လိုက်ပြီးတော့ ဗွီဒီယိုရိုက်တာ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ၊ အဲဒါ သူတို့က တောက်လျှောက်လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့က ဆီဈေးတွေ တက်လို့ ကျနော်တို့က လမ်းလျှောက်တာ ဖြစ်တယ် ။ ဒါလူထုရဲ့ ခံစားမှုကို ပြသတာဖြစ်တယ် ဆိုတာလောက်ကိုပဲ ကျနော်တို့က ဒီကားပေါ်က ခရီးသည်တွေ၊ ကျနော်တို့ ပြောပြသွားပြီး လုပ်ကြတာပါ။
လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် ကြီးမြင့်နေမှုကို ကန့်ကွက်သော ဆန္ဒပြပွဲ တခုကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်း သားများက ဦးစီး၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူအင်အား ထောင်ဂဏန်းအထိ ရှိလာ သော လူအုပ်စုကြီးက ရွှေဂုံတိုင်မှသည် တာမွေဈေးအထိ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Ko Niknayman at 7:20 AM